ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ် ~ ~နွေဦးမိုး~
~နတ္ထိဏိမ်း ရဲ့ Solo World~ ဘ၀ကို ရိုးသားစွာနေလိုသူ လူတွေကို ရိုးသားစွာ ဆက်ဆံလိုသူ ဒီလိုနဲ့ solo world မှာ နေထိုင်သူ (အရင်က စာတွေအများကြီးတွေ့ပါတယ်။ ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ လို့ သတိတရ မေးလာတဲ့ မိတ်ဆွေများကို တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။၂၀၀၈ ခုနှစ်မှအစပြု၍ ၀ါသနာအရ ရေးသားခဲ့သော ပို့စ်များကို စိတ်လိုက်မာန်ပါ ဖျက်ပစ်မိခဲ့ပါတယ်။ ပြန်ရှာလို့ ရသမျှပို့စ်အဟောင်းလေးတွေကိုသာ ပြန်တင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စာနည်းပါး နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့… အချိန်ပေးပြီးလာရောက်ဖတ်ရှုတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်း) )
Tag from bst frdz
3:54 AM ကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တရ6comments
တယ်လီဖုန်းစင်နားမှာမတ်တပ်ရပ်ရင်း မိုးတွေသည်းလေတွေထန်နေတဲ့ လေယာဉ်ရပ်ထားရာကွင်းပြင်ထဲကိုငေးကောင်းကောင်းနဲ့ ငေးမောနေခိုက်...
“ဟေ့...ကောင်မလေး.ဘာတွေငေးနေတာလဲ။ မုန့်ကိုကုန်အောင်မစားလို့ ဦးအုန်းဆူလိမ့်မယ်။ သွားသွား...အမြန်သွားစား”
“ဟင်...အဲဒါအနော့်ဖို့ဟုတ်လို့လား။ ကိုသက်အောင်တစ်ဝက် အနော်တစ်ဝက်လေ”
“အာ..ဒီကောင်လေးက ဦးအုန်းနဲ့လိုက်သွားပြီး အပြင်မှာအ၀တီးလာတာ.ညည်းပဲဝအောင်စား”
“အာ..ဒါဆိုရင်တော့ကော်တာပဲ..အနော်ကသူ့ဖို့ထင်လို့ ချန်ထားရတာ။ အရမ်းကြိုက်လို့အကုန်စားချင်တာ”
ပြောရင်းနဲ့ပဲ သူမတို့ စားသောက်နေကျနေရာလေးကမုန့်ဆီကို အရောက်သွားပြီး ကြိုက်လှတဲ့ အာလူးကတ်တလစ်ကိုအကုန် စားလိုက်တယ်။
“ရော့...သမီး ။ ညည်းသိပ်ကြိုက်တဲ့ ထားဝယ်မကြီး ၀က်သားနှပ်”
ဦးအုန်းဗိုက်ထဲပုဏ္ဏားလေးများရှိလေသလား။အဘအမျိုးသမီးသုပ်တဲ့သရက်ချဉ်သုပ်ကလဲကောင်းမှကောင်း။ ကိုသက်အောင်ငပိချက်ကလဲ ရှယ်ပဲ။ အမလေး...အနော့်ဗိုက်တော့ဒီနေ့ခွေးနမ်းတော့မှာပါပဲ”
“စား..စား..၀အောင်သာစား..ဒီကလေး၂ယောက်ရှိနေလို့ ငါဝယ်ရကျိုးနပ်တာ. နို့မိုဆိုညည်းအဘက တို့ကနန်းဆိတ်ကနန်းစားတာ”
“ဟဲဟဲ..အဘတို့ကနန်းဆိတ်ကနန်းစားတော့ အနော်နဲ့ကိုသက်အောင် အ၀တီးရတာပေါ့”
“ဟုတ်တယ်..ကျနော်ကတော့ အ၀ကိုတီးမှာ။ အဘဖို့မကျန်ရင်နေပလေ့စေ။ မချန်တော့ဘူး။ အဘလာရင်မရှိတော့ဘူးပြောလိုက်မယ်..ဟီဟိ”
နောက်ဖက်ကိုရေနွေးသွားထဲ့တဲ့ အဘ တစ်စွန်းတစ်စကြားတော့
ဒီလိုနဲ့စရင်းနောက်ရင်း ထမင်းဝိုင်းလေးဟာ အမြဲစိုပြည်ဆဲ။ ထမင်းစားရင် လူစုံအောင်စောင့်ပြီးမှာစားလေ့ရှိတဲ့ဓလေ့လေးကလဲချစ်စရာပါ။
အကုန်လုံးတစ်ယောက်တစ်လှည့်ဝိုင်းထည့်ပေးတဲ့ အရသာရှိတဲ့ ထမင်းလေးကိုစားပြီး အဘထည့်လာတဲ့ ရေနွေးတစ်ကြိုက်သောက်လိုက်တယ်။
အဲဒိကောင်မလေးက ဦးအုန်းဝယ်ကျွေးနေကျ ထားဝယ်မကြီးဝက်သားနှပ်နဲ့ အာလူးကတ်တလစ်ကို သိပ်ကြိုက်ခဲ့တာပါ။
“Audit ကြီးလာပြီ...စာရွက်စာတမ်းတွေရှာဖို့သာပြင်ပေတော့ ငါတော့လစ်ပြီ။နက်ဖြန်ကျမုန့်တွေအများကြီးဝယ်လာမယ်နော်..မင်းတို့ကုန်အောင်စားရမယ်”
ဦးအုန်းက မျက်စိတစ်ဖက်မှိတ် ပြောင်ပြရင်းလွယ်အိတ်ကောက်လွယ်ထွက်သွားတယ်။ (အမှန်တော့ ၂နာရီသူ့ဂျူတီချိန်းတာမို့ ပြန်တာပါ)
Audit ကတော့ စတိုင်လ် အပြည့်နဲ့ရောက်လာပြီးသကာလ။ မင်းသားကြီးအက်ရှင်မျိုးနဲ့ လက်ပ်တော့အိတ်ကြီးစားပွဲပေါ်တင်...ထိုင်ခုံပေါ်မိန့်မိန့်ကြီးထိုင်လိုက်တယ်။
“ကဲ..၂၀၀၂က Airway Bill တွေစစ်မယ်”
သေစမ်းဟ နန္ဒိယ လို့သာ စ်ိတ်ထဲကကြိတ်အော်လိုက်တယ်။ ဟုတ်တယ်လေ။ ကိုယ်တွေတင်ထားက ၂၀၀၅ ၂၀၀၆ စာရွက်စာတမ်းတွေ သူကြည့်ချင်တဲ့ list ချပြလာတော့...အားပါးပါး....ရှေ့နှစ်ဟာတောင်မနည်းရှာရမှာ...ဒါဆိုရင်တော့...မလွယ် မလွယ်။။။တွေးပြီးသကာလ။ ကိုသက်အောင်နဲ့ကောင်မလေးတို့ ဖိုင်လ်တွေထားတဲ့ အခန်းလေးထဲရောက်လာခဲ့ရတယ်။
“ရော့ ...နင်ကဒီဖိုင်လ်ထဲမှာရှာ။ ငါကဒီဖိုင်လ်ထဲမှာရှာမယ် ကောင်မလေး”
ကိုသက်အောင်ပေးတဲ့ ဖို်င်လ်ပုံထဲခေါင်းနှစ်ရှာရင်း။ ပါးစပ်ကပွစိပွစိပြောနေမိတယ် “Audit ကြီးကလဲ လွယ်ရာတေ့ာမရှာခိုင်းဘူး။ ဘယ်ပဝေဏသီကဟာတွေလာရှာခိုင်းလဲမသိဘူး။ စိတ်ညစ်တယ်။ခေါင်းတောင်မူးလာပြီ။”အဲလိုတဗျစ်တောက်တောက်ပြောရင်း
အဲဒိကောင်မလေးဟာ အဟောင်းတွေမြေလှန်ရှာဖွေရမှာ စိတ်မရှည်တတ်သူပါ။
“ကောင်မလေး..နင်ပိန်တယ်။သက်အောင်ကပိုပိန်တယ်။ နေဦး...ဒီကလေးနှစ်ယောက်ကိုငါဝအောင် အစားတွေအရမ်းကျွေးမှဖြစ်မယ်။ မင်းတို့ ၂ယောက်အိမ်မှာဆိုစောင့်ကျွေးသူမရှိရင် ထမင်းကောင်းကောင်းမစားဘူးမဟုတ်လား”
“အိမ်ကချက်တဲ့ဟင်းတွေမကြိုက်လို့ အဘတို့ ဦးအုန်းတို့ ချက်တာပိုကောင်းလို့”
၂ယောက်လုံးအဖြေက ညီတယ်။ ဒါမျိုးကျ။ အမှန်က ထမင်းကို ဟုတ်တိပတ်တိ မစားကြတဲ့ လူတွေပါ။ အိမ်ကချက်တာလဲ ကောင်းကြပါတယ်။ လူငယ်ဆိုတော့ အဖော်မင်တဲ့သဘောပေါ့လေ။
“ရော့....ဒီဆေးကိုသောက် မင်းတို့တွေ ကိုယ်တွင်းမှာအပူများနေလို့ဖြစ်မယ်။ ကောင်မလေး...သမီးဝချင်တယ်မဟုတ်လား”
ဆေးဗူးးလေးကိုလှမ်းယူရင်း နာမည်ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ သိကြားရေစင်တဲ့။
၀ချင်တဲ့ကောင်မလေး။ဘာရမလဲ။ရုံးမှာ နေ့လည်စာထမင်း စားပြီးတာနဲ့ ဆေးဗူးဆီ ပြေးမော့တော့တာပဲ။ ကောင်မလေးလဲ အပူကင်းပြီးနည်းနည်းတော့ဝလာတယ်။
အရင်လိုပိန်ကပ်ကပ်မဟုတ်တော့ဘူး။ ၀ ချင်တဲ့ကောင်မလေး ၀မ်းသာအားရနဲ့ ဆေးနာမည်ကို ပြောင်းခေါ်လိုက်တယ်။အဘရေစင် လို့။
နောက်ပိုင်းတော့အဘက ဆေးဗူးတွေအများကြီးရုံးမှာသောက်သူချင်သောက် ၀ယ်ထားပေးတတ်သလို ကောင်မလေးဝေးတစ်မြေရောက်သွားတော့လဲ သူ့တူမကောင်မလေးကို လူကြုံနဲ့ဆေးဗူးထည့်ပေးလိုက်တာမှ အများကြီး။
လက်ဖက်သုပ်ကို သဘောင်္ရွက်စိမ်းလေး ရိတ်ရိတ်လှီးထည့်စားရမှ သဘောပိုကျတတ်တဲ့ ကောင်မလေးတို့အုပ်စုကြောင့်ရန်ကုန်အဲယားဝေးက
အန်ကယ်တစ်ယောက် စိုက်ပျိုးထားတဲ့ သဘောင်္ပင်ငယ်လေးတွေဆို ကတုံးနီးပါးဖြစ်လို့ ။
ဒီနေ့ ဒီအပင်ကခူး၇င်။နောက်တစ်နေ့ကျတော့နောက်အပင်အလှည့်။ စိုက်တဲ့ အန်ကယ်ကတော့ပြောပါတယ်။
“ဒီကောင်မလေးရောက်လာမှ ကျနော့အပင်အသီးတောင်သီးပါဦးမလားဗျာ သက်အောင်ကလဲ အရွက်တွေလာလာခူးတယ်” တဲ့။
သူ့တူနဲ့တူမကိုပြောရင်ခံလေ့မရှိတဲ့ ဦးအုန်းနဲ့အဘက ပြန်နောက်တယ်။
“ဒီကလေး၂ယောက်ကိုခင်ဗျားကျေးဇူးတင်ရမှာ။ အပင်ဆိုတာ အရွက်နုထွက်မှပိုသန်မှာ။ ပိုသန်မှ ခင်ဗျားအပင်မြန်မြန်ကြီးပြီး မြန်မြန်သီးမှာပေါ့။ သက်အောင်ကလဲလိမ္မာပါတယ်။ အပင်ထီးတွေပဲရွေးခူးတာပါဗျ“ တဲ့။
နေ့လည်ခင်းတိုင်း ကောင်မလေးက လက်ဖက်တစ်ရက် ၈ျင်းတစ်ရက်သုပ်လေ့ရှိတယ်။ လကုန်ရင်ကောင်မလေးတို့အုပ်စုတွေ လက်ဖက်ဖိုး ဂျင်းဖိုးစု။တစ်လစာအများကြီးဝယ်ပြီးတော့သုပ်စားကြတာ။
အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်လာ၇င်တော့ကောင်မလေးက ဂိုဏ်းချုပ်ကြီးပေါ့။ သူပဲဦးဆောင်လုပ်တာ။ တစ်ရက်တော့ လက်ဖက်ဂျင်းဗူးဟာ ပို့ကုန်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်လိုက်ရတဲ့ ဟာသလေးတစ်ရပ်ဖြစ်သွားခဲ့ဖူးတယ်။
“ဟိုမှာ ဂတ်စပါကြီးလာနေပြီဟ။ ဒီဖက်ကို တန်းလာနေတာ
အဘအပြောကြောင့် လေယာဉ်အင်ဂျင်။လျှပ်စစ်ပစ္စည်း အ၀င်အထွက်တွေကို bin card ကြည့်ပြီးစာရင်းသွင်းနေရင်းကကောင်မလေး ပူထူသွားမိတယ်။
“ဟယ်.... ဒုက္ခပါပဲ။ သူသာအနောက်ဖက်ထဲဝင်ကြည့်ရင် အနော့်တို့ရဲ့ လက်ဖက်ဗူးကြီးကိုမြင်တော့မှာပေါ့။ ဗူးတွေက အကြီးကြီးနဲ့အများကြီး ဘယ်နေရာဖွက်ရပါ့“
ကောင်မလေးအပြောကြောင့်အကုန်ပျာယာခတ်သွားတယ်။ အမြဲဥာဏ်ကြီးတဲ့အဘက ခဏစဉ်းစားပြီး ။
“နက်ဖြန် စင်္ကာပူက ATR ကို ပြင်ဖို့ပို့မယ့် လေယာဉ်အင်ဂျင်ဗုံးကြီးအားနေတယ်။ ဆီတွေအရမ်းယိုလို့ ငါအပြင်ခဏထုတ်ထားတယ်။ အဲဒိထဲခဏထည့်ထား”
အဘပြောတဲ့အတိုင်းပဲ အကုန်လုံးတစ်ယောက်တစ်လက်နဲ့ ၀ိုင်းထည့်လိုက်ကြတယ်။ ပစ္စည်းတွေထည့်တဲ့ဗူးတွေကလဲအများသား။ ဆိုင်မှာလို အကျအနသုပ်စားတာဆိုတော့ ပဲမှုန့်ဘူးကအစ ငရုပ်သီးစိမ်း ကြက်သွန်ဖြူအစုံရှိတာ။ ထည့်ပြီးတော့ အပြင်ပြန်ထွက်အလာ..ဂတ်စပါကြီးလဲ အခန်းထဲကိုအေ၇ာက်။ ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာတို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့. လိုအပ်သည်များကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးပေါ့။ ဟိုကြည့်ဒီကြည့် ပစ္စည်းတွေအထားအသိုကြည့်။အဲယားကွန်းအပူချိန်ကိုစစ်။ ပြန်တော့မယ်ပြင်ပေါ့။ ကိုယ်လဲ..သြော် တော်သေးသပေါ့။ ငါ့လက်ဖက်ဗူးတော့လွတ်ပြီလို့တွေးရုံရှိသေး။ ဂတ်စပါကြီးက ဓာတ်ကျပြီး လက်ဖက်ဗူးကြီးနား စွေ့ကနဲရောက်သွားတယ်။ “What is this?” မျက်နှာလေးဇီးရွက်လောက်ပဲရှိတော့တဲ့ အခိုက် ...အင်္ဂလိပ်စကားအရမ်းကျွမ်းတဲ့ ဦးအုန်းအပြေးရောက်လာပြီး အင်ဂျင်ဆီယိုလို့။ အာမခံသက်တမ်းမကုန်သေးလို့ စင်္ကာပူကိုပြင်ဖို့ပြန်ပို့မယ့်အကြောင်း။ဘာညာဘာညာ ပြောလိုက်တာ ဂတ်စပါကြီးယုံသွားတယ်ဆရာ။
အဲဒိကောင်မလေးဟာ လက်ဖက်သုပ် ဂျင်းသုပ်သိပ်ကြိုက်တယ်။
နေ့ခင်းအားလပ်ချိန်တွေအောက်ဖက်ရုံးမှာနေရတာ ပျင်းလာရင် အပေါ်ရုံးကစီနီယာမမတို့ ရှိတဲ့ အရပ်သွားပြီးလေဖုတ်လိုက် မုန့်တုတ်လိုက်လုပ်တတ်သေးတာ။ သီချင်းကောင်းလေးတွေရွေးဖွင့်ပြတတ်သလို ဟင်းချက်ကောင်းတဲ့မမနု။
အချဉ်ထုပ်လေးတွေ ခဏခဏကျွေးတတ်သလို ဟင်းကောင်းတွေအမြဲထည့်လာလေ့ရှိတဲ့ မမသဉ္စာ။
စကားပြောရင်အေးအေးလေးပြောပြီး ကောင်မလေးကို ညီမအရင်းလိုသဘောထားပြီး စာကျက်မပျင်းဖို့ ဆုံးမလေ့ရှိတဲ့....မမထား။တို့ဟာ ကောင်မလေးရဲ့ အမရင်းတွေသဖွယ် ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ မိသားစုမိတ်ဆွေတွေဖြစ်သလိုPilot ဒါရိုက်တာရင်ရဲ့ညီ ...သူဌေးပေါက်စကိုမင်းမင်း။
သက်ရွယ်တူချင်းမို့နင်ငါပြောပါဆိုတာကို ပြောမရဘဲ အမလို့သာဇွတ်ခေါ်လေ့ရှိတဲ့ ကိုညီညီ။
သူ့ကောင်မလေးကို သိပ်ချစ်တဲ့ကိုသန်းဝင်း။ အဘတူမောင်ဇော်ထက် တို့ဟာလဲ ခင်မင်ဖို့ကောင်းတဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေပါ။
အမြဲပြုံးနေတတ်ကြတဲ့ ...အင်ဂျင်နီယာအန်ကယ်လ်ကျော်။ အန်ကယ်လ်သက်။အန်ကယ်လ်ရွှေ။ အန်ကယ်လ်ဇေ။ အန်ကယ်လ်ကြီး။ ဦးအုန်း။ ဦးစိုးနိုင်။အဘ ဦးသိန်းဟန် တို့ကတော့ကောင်မလေးရဲ့တကယ့်ဦးလေးဆွေမျိုးသားချင်းတွေလိုပါပဲ။
ဖအကေို သိပျခဈြတဲ့ ကောငျမလေးအဖို့ သူ့ဖဖေနေဲ့ ဖယျရီ အတူတူစီးဖျော ဦးစိုးနိုငျ ၊ ကိုအောငျသကျထှေး၊ ကိုရဲမွငျ့တို့ကို လညျး ခငျနပွေနျရော။
ဒီကြားထဲ ၂ပတ်တစ်ခါဆိုသလိုရုံးချုပ်ကနေ လေယာဉ်ရုံးကိုရောက်လာတတ်ပြီး ။ သူလာရင်တော့ သီချင်းတွေမျိုးစုံဖွင့်တတ်တဲ့ တရုံးလုံးအတွက် မုန့်တွေအများကြီးရက်ေ၇ာစွာဝယ်လာလေ့ရှိတဲ့..ကွန်ပျူတာအပြင်တော်တဲ့ ကိုဇေယျ ဟာလဲ ခင်ဖို့ကောင်းတဲ့ အကိုကြီး တစ်ဦးပေါ့။
အကြံပြုသူကအဘဖြစ်ပြီး အဘတူ မောင်ဇော်ထက်ကတော့ အပင်စိုက်ဖို့လိုတာကူပေးတယ်။ ရောင်းရင်းကြီးကိုသက်အောင်ကတော့ မကူခဲ့ပေမယ့် အပင်ပေါက်မပေါက်စိတ်ဝင်စားတယ်။ ပေါက်မှာပါတဲ့ အားပေးတယ်။
တကယ်တော့ ကောင်မလေးဟာ ......
-ဝေးတမြေကို မသွားခင်မှာ မိသားစုဆန်ဆန်ခင်မင်ဖို့ကောင်းလွန်းတဲ့ လူတစ်စုနဲ့ ကလေးပီပီဘ၀ကြီးတစ်ခုကိုပျော်ပျော်ကြီးရခဲ့ဖူးသူ။
-ရုံးခန်းရှိရာ နှစ်ထပ်တိုက်လေးကိုရောက်ဖို့ အေးမြမှုနဲ့အမြဲစိမ်းလန်းနေတဲ့ သစ်ပင်အောက် ကဖြတ်လျှောက်လေ့ရှိပြီး လေယာဉ်အတက်အဆင်းတွေကို ငေးမောခဲ့ဖူးသူ။
-အိမ်ကလာကြိုလို့များနောက်ကျရင်စိတ်ကောက်တတ်လွန်းလို့ အချိန်းအချက်လုပ်ဖို့ လက်ကိုင်ဖုန်းကိုပေးထားပြန်တော့ ကားဘီးပေါက်လို့ (သို့) အကြောင်းတခုခုရှိလို့ နောက်ကျရက်ဆို ဖုန်းတဂွမ်ဂွမ်ဆက်ပြီး စောင့်ရတာကြာလို့ဆိုကာ ဂျစ်တိုက်ခဲ့ဖူးသူ။
ဒါပေမယ့် သူဟာ...ခင်မင်ခဲ့ဖူးတွေကို ဘယ်တော့မှလွယ်လွယ်နဲ့မေ့မသွားတတ်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါပဲ။
Ko Zey said...
အဲဒီကောင်မလေးပေါ့.. သူ့ Facebook အကောင့်ကို ဖျက်ဖျက်ပစ်တာ ၂ ခါရှိပြီ.. :D
heehee. :D အနော့် အကျင့်ဆိုးတွေ သိကုန်ဘီ :D
အဟမ်း..အဟမ်း ..အဲ့ကောင်မလေးကို ရှာပေးပါ၊ အနော်လဲ ခင်မိသွားလို့ :P
(ကူညီမယ် ဟုတ် ;) )
ထရီဆာ >> ဟားဟား ရှာပေးမယ် ရှာပေးမယ်။
အဲ ... ကောင်မလေးကို သိတယ် :p
စုံထောက်ကြီး ဆရာမ ရင်ငြိမ်းသူ :P
သာမန်ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါပဲ။ ရုပ်မချောဘူး ချစ်ဖို့မကောင်းဘူး ခင်ဖို့ကောင်းတဲ့ရုပ်ထွက်မနေဘူး စိတ်က...
(photo credit to : Google) (ကာတွန်းလေးဆွဲပြီး ပို့စ်တင်မယ်လို့ စိတ်ကူးခဲ့ပေမယ့် ဒီညနေမှ ကဗျာကသီထရေးပြီး အချိန်မရှိတော့လို့ Googl...
မျိုးတူသော (သို့မဟုတ်) ကွဲပြားလေသော နံရိုးများ
“ခရေပင်အောက်သို့ ရောက်လေတိုင်းဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးထဲကနှင်းဟာ ကြည်ဖြူပိုင်ရဲ့ တကယ့်အဖြစ်အပျက်ကို အခြေခံပြီး ရေးထားခဲ့တာလားဟင်” “န...
Photo Source : Google (၁) သူမအကြိုက်ဆုံးအရောင်ကို သူကမေးလာခဲ့တော့ အဖြူရောင်ဟုရဲရင့်စွာပဲဖြေခဲ့သည်။ ဒုတိယနဲ့တတိယအကြိုက်ဆုံးအရောင်ကို...
(၁) ကိုထွန်းမောင်ကျောပြင်ကို ကြည့်ပြီး မခင်မေတစ်ယောက် သက်ပြင်းတချချ မျက်စောင်းတထိုးထိုးရှိနေသည်။ ကိုထွန်းမောင်သာ အရင်လို သူမကို ဂရုတစ...
ကိုရင်သာမောင်ရေ.....ခုတော့ ရှင့်ကိုကျုပ်နားလည်ပါပြီတော်။ အရင်ကရှင် ရွာထိပ်ကညောင်ညိုပင်အောက်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီး တငူငူတငိုင်ငိုင်နဲ့ .လ...
ခုချိန်မှာ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက ချစ်သမီးရေ...။ ဘာဆုကိုလိုချင်သလဲ တောင်းနိုင်လေရဲ့လို့...ဆိုခဲ့ရင်။ တောင်းပါရစေဘုရား...
င့ါအတွက် မဖြစ်တဲ့ နင်
မင်းဟာ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့ရင် အဓိပ္ပါယ်တွေကို ဖော်ပြနိုင်တဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခု ဖြစ်ချင်တယ်။ မင်းဟာ ဂစ်တာလေးတစ်လက်ဖြစ်ခဲ့ရင်...
Tag Post (3)
ကဗျာလိုလို ဘာလိုလို (3)
မေဂျာတူ အကိုတော် ရွာသားလေး(YTU)
သိင်္ဂါရ ရဲ့ ကဗျာလှလှလေးများ စုစည်းရာ
မမဖြိုးရဲ့ My World
ကျွန်တော်၊ ကျွန်မတို့သည် (We She Me)
Copyright © 2012 ~နွေဦးမိုး~ | Powered by Blogger